Ultra Starter Off Grid Solar System 5.0kW Kit -18 PV panels - Kimroy Bailey Group
2 nyocha ndị ahịa|Tinye a nyochaa
Ultra Starter Off Grid Solar na Batrị ndabere bụ ngwugwu zuru ezu iji nwee ike iji ụlọ gị nwee ike n'efu site na anyanwụ. Ngwa ahụ gụnyere ihe niile achọrọ.
SKU: RE-CK05 Categories: Ngwa zuru ezu, Renewable Energy, Ngwaahịa Ike Mmeghari ohuru Tag: Gbanyụọ Sistemụ Grid
TheUltra Starter Off Grid Solar System 4.95kW Kit bụ ngwugwu Off-Grid Dị njikere ị ga - ebupute ma wụnye ma kwụọ ụgwọ ụgwọ ike gị ozugbo. Wepụ isi ọwụwa site na-eche ụdị akụkụ ịchọrọ inwe yana nke ị na-achọghị. Ihe SUltra Starter Off Grid Solar System 4.95kW Kit bụ nkwekọrịta kachasị mma iji bulie dollar gị na ọbụghị Solar ibido mana nweta ike zuru oke iji tụkwasata akụrụngwa gị dị mkpa ike.
18 Mbara Anyanwụ na-ewepụta ihe karịrị 4.95kW nke ike
1 Inverter nke na-enye 6kW nke ike Peak
Ihe ngbagha nke ogwe
Ultra Starter Off Grid Solar System 4.95kW Kit bụ maka onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye ike anyanwụ n'ụlọ ha na-enweghị:
Isi ọwụwa nke nnwale na njehie n'ihi ịzụ ahịa gburugburu.
Na-eche ihe ị chọrọ na ihe ị na-achọghị
Yingzụta ihe n’ime iberibe ma nwee olile anya na ha niile dakọrịtara
Naanị ịchọrọ nzi dị mfe nke na-enye nnukwu ike.
Ego Nwepu US $ 18,700 😍
Kwadoro ruo mgbe July 30, 2020 na etiti abalị UC +0
Nkwalite ọkọchị na-agụnye US $ 6,800 nọ na sistemụ! 😲
Echichi kompeni US $ 4,200
Nyochaa afọ 3 US $ 1,200 (400 / afọ)
Nlekọta afọ abụọ US $ 2 (1,400 / afọ)
Younwere ike idobe usoro nwepu ego na uru niile site na itinye nkwụnyeghachi US $ 4,000 tupu nkwalite ahụ akwụsị. A ga-ewepụ nkwụnye ego a na ego ị ga - akwụ ụgwọ yabụ naanị ị ga - akwụ US $ 14,700 mgbe ịkwadebe maka sistemụ gị.
Dị mkpa, anyị maara na nke a na-eme ya ma ọ bụrụ na ihe gbagotere nkwụnye ego gị bụ nkwụghachi ụgwọ 100%, enweghị ajụjụ a jụrụ. (Anyị ga - ajụ gị maka akaụntụ gị ka iziga nkwụghachi ahụ 😊)
Gịnị nwere ike Ultra Start Off Off Grid Comple Kit Kit nwere ike n’ụlọ gị:
Ngalaba Igwe Nzuzo
Ihe ndị ọzọ!
Mara: Oge ụfọdụ ọ bụghị ngwa ọrụ niile ga na-arụ ọrụ n'otu oge. Enwere ike ibute nke a, mana enweghị njedebe na: oge ​​ụbọchị ma ọ bụ ike echekwara na batrị.
Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ maka Ultra Starter Off Grid Solar System 4.95kW Kit
Agụmakwụkwọ akwadoro maka Ultra Starter Off Grid Solar System 4.95kW Kit
Maka ndị ga-achọ nduzi zuru oke maka ịwụnye sistemụ fotovoltaic nke anyanwụ anyị na-akwado ka ị zụta nke ahụ Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe. Nzọụkwụ site na usoro anwụ na-akụ gị otu esi ejikwa ntụkwasị obi wụnye sistemu nke mbara igwe zuru ezu. Nke kachasị mkpa, Thislọ akwụkwọ a bụ nke mbido-ọbụbụenyi ma ọchọghị ahụmịhe nke anyanwụ ma ọ bụ ọkachamara nrụnye.
Nke a bụ Kimroy Bailey Group Solar Package Customer Testimonial iji hụ sistemụ na-arụ ọrụ.
2 reviews maka Ultra Starter Off Grid Solar System 5.0kW Kit -18 PV panels
Kimroy Bailey - July 21, 2018
The Super Power Pack zuru oke igwe bụ ngwugwu Grid Package ga-atụkwasị ike gị niile ngwa niile gụnyere: friji, igwe na-asacha, igwe nkụ, ọkụ, TV, ngwa ndọkụrịta na ndị ọzọ. Ana m akwado ngwugwu a n'ụzọ zuru oke ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị ụgwọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ike.
Di m zụtara ngwungwu a otu afọ gara aga, ọ bufere ya n'efu ka anyị bi ebe a na Austria ma ọ na-arụ ọrụ dị ka amara. Haslọ anyị anọwo na mmiri ma anyị hụrụ ngwungwu anyanwụ n'anya, maka Kimroy Bailey Group na onye nnọchite anyị.
MeGA Power Off Grid Solar Sistem 6.6kW Kit nwere 24 Mgbaaka